Ndụ na echiche nke Ahmed Baba (1556-1627) - Afrikhepri Fondation
wednesday, Febrụwarị 24, 2021
Na-agụ: 6 min
Amụrụ na Ọktoba 26, 1556, na Araouane, Mali Ahmad ibn Ahmad al-Takuri Al-Musafi al Timbukti bụ otu n’ime ndị kacha eche echiche n’oge ya. Nanị ndụ ya na-achịkọta ihe niile dị mma ma n'otu oge ahụ ọdachi na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ọgba aghara na Western Sudan.
Na-ekwu: “Gị onye na-aga Gao, tụgharịa si na Timbuktu gabiga. Ghaa ndị enyi m aha m, wetara ha ekele na-esi ísì ụtọ nke ndị a dọọrọ n'agha, bụ ndị na-achọsi ike maka ala ebe ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya, ndị agbata obi ya bi. Na-akasi ndị m hụrụ n'anya obi maka ọnwụ nke ndị nwenụ ndị e lirila ”.
Oge mmalite ya
Ọ bụ na Araouane ka Ahmed na-eto eto ji oge ọ bụ nwata. Ugbua, o gosiputara ezigbo mmasi na ihe obula nke sayensi, ihe omuma na akwukwo. Iji mezuo ihe ọmụma ya, ya na nna ya onye ọka iwu Alhadji Ahmadou gara Timbuktu. Nke ikpeazụ azụlitegoro, amaraworị maka ihe ọmụma ya.
Abata na Timbuktu, Ahmed Baba na-agbaso usoro a na-ahụkarị maka agụmakwụkwọ. N'okpuru ntuziaka nke nnukwu prọfesọ Mohammed Baghayogo, o gosipụtara ngwa ngwa na ya nwere nkà n'ịmụ sayensị. Ọ mụrụ nkà ihe ọmụma, mgbagha, ntụgharị, iwu, ụtọasụsụ, nkà mmụta okpukpe, nkwupụta okwu, akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ, wdg. Ọ bụ mgbe afọ iri atọ gụsịrị akwụkwọ ya, ka ọ gụsịrị ọzụzụ ogologo oge, mana ọ kachasị mkpa.
N'ịbụ onye ghọrọ prọfesọ n'onwe ya, ọ kụziri nkà ihe ọmụma nke onwe ya, bụrụ n'otu oge ahụ otu n'ime ndị ọkà mmụta okpukpe Sudan kachasị ukwuu. Ọ hapụrụ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, ndị ọbụlagodi mgbe ọ nwụsịrị ga-agbasa nkuzi ya.
Tinyere ọrụ agụmakwụkwọ ya, nnukwu ọkà mmụta ahụ ga-ewere ọrụ nke cadi, ya bụ banyere onye ọka ikpe Alakụba. Omume nke kacha dị ọcha, ọ gaara ede ihe na-erughị otu narị akwụkwọ dịka ụfọdụ n'ime ha siri mara 56. Site na mpịakọta ndị a, Ahmed Baba kọwara nkwenkwe okpukpe ya, nkà ihe ọmụma ya, uri ya na ọbụnadị akụkụ nke mmetụta onwe ya.
Echiche Baba ka dịkwa oke mkpa nye ọtụtụ ndị Sudan taa. Ka o sina dị, ekwesiri icheta na ọ ka dị elu karịa onye ọkà mmụta okpukpe Alakụba na na akụkụ dị mma nke echiche ya edepụtara na nkwenkwe na ụkpụrụ omume Alakụba. Ma nkà ihe ọmụma ya na-agbakwa akaebe mmụọ mmụọ Africa ya. O kwuru na mmalite ya ma nwee obi ụtọ ịbụ onye Sudan.
Ahmed Baba pụtara ihe dị ukwuu site na ndị ha na ya dịkọrọ ndụ site na iche echiche ya. Ewere ya dịka Mujjadid, onye mmegharị okpukpe nke narị afọ. Dị ka Nsame Mbongo si kwuo, ịbụ onye na-eweta echiche ọhụrụ, ọ jụrụ dị ka onye ọkà ihe ọmụma, ịkọ nkọ efu na ịtụgharị uche n'echiche.
Site n'ọtụtụ ederede mgbe ụfọdụ, onye Mali ahụ gbachiteere echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, echiche na nke okpukpe ya. Akwụkwọ ya nke akpọrọ "Jalb al-nima ma wadaf al-niqma bi-mujanabat al wulat al-zalama" (Lucky na ọjọọ chioma: na-ezere ndị ọchịchị na-ezighi ezi) gosipụtara ikike ya ịhapụ ihe ndị na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe. Ọnọdụ ndị a vis-à-vis ike na obi abụọ ọ na-edobe maka onwe ya, na-egosi etu o si akpali echiche. Edere ya na 1588, ihe banyere nmekorita nke ndi omumu na ndi ndoro ndoro ochichi. Otú ọ dị, ọ dịghị ezobe ebumnuche onwe onye mere ka ọ dee ya. "Ọ bụ iji kpachara anya ma dọọ ndị agbata obi m na ndị ọgbọ m aka na ntị ka ha na ndị ọchịchị aka ike na-akpakọrịta bụ nke m dere olu a,"
N'ịmara na mmadụ bụ onye na-adịghị ike, ole nke ga-azụlite nke ikpeazụ, Ahmed Baba tụbara ọtụtụ ndị ọgụgụ isi maka enweghị ezi omume ha. Ọ gbara ajụjụ banyere akparamagwa nke ụfọdụ ndị sayensị, ndị kwere ka ike ha merụọ ha, tufuo ikike niile dị ịtụnanya nke otu onye ọchịchị a.
Ihe omumu a adighi agbagha ike, na-ahuta ya dika ihe mmebi iwu. Kama nke ahụ, maka Ahmed Baba ike na-emebi ma ọ bụrụ na ọ na-emebi, mkparị ma ọ bụ aka ike. Ezi ochichi, tinyere ezi uche na aka nke ndi muru akwukwo, puru izere otutu agwa di iche, dika ya si kwuo.
Omume nke onye ọkà mmụta sayensị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ga-ekpebisi ike n'ihe metụtara ụkpụrụ omume na abụghị nke ihe onwunwe. Ọ bụrụ na ike ziri ezi, onye sayensị nwere ike ijikọ aka na ya site na ịsị na ndụmọdụ a. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ aghụghọ na-emebi ihe, ọkà mmụta okpukpe ga-anọrịrị ebe dị anya. Iji gosipụta oke ebumnuche ahụ dị mkpa karịa ihe ahụ, onye ọkà ihe ọmụma kọwara na 1592 echiche nke "niyya", na ọrụ ya nke isiokwu ya bụ "Ghayat al-amal fi fadl al-niyya ala l-amal" (ebumnuche dị elu karịa ime ihe).
Dị ka ọ sịrị:
“Niyya bụ okwu onye chọrọ ime ihe na-ekwu okwu ma ọ bụ nke uche. Ọ nwere ọnọdụ ya n'ime obi, isi ihe ọgụgụ isi na ọrụ ".
Maka Nsame Mbongo, obi bu ihe kachasi nma nke aru mmadu na ebumnuche nke akuku a na-achoputa ya, o na-ebu ikike nke onye a ma buru ihe di elu karie ihe ahu, nke bu eziokwu. “Akụkụ ndị dị n’ime” nke nje ahụ, akụkụ ndị na-abaghị uru. A na-eme ka arụmụka a sie ike site na ịtụle na ebumnuche ahụ bụ nke ngalaba iwu mgbe omume ahụ dabara na ngalaba igbu. Ya mere, ọ dị ala karịa ùgwù site n'ọchịchọ ebumnuche, nke iwu na nke ọ na-erube isi. Nke a bụ naanị otu ihe atụ nke ọrụ ntụgharị uche nke BABA na-eme na nyocha ya niile.
N'agbanyeghị nke a dịka Nsame Mbongo si kwuo, Ahmed BABA bụ onye ọkà ihe ọmụma na echiche zuru oke nke okwu ahụ ka ọ na-atụgharị uche na ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Dịka ọmụmaatụ, njikọ dị n'etiti ebumnuche na omume, n'etiti ihe ọmụma na ike, ma ọ bụ n'etiti ike na sayensị. Ọzọkwa, ọ na-aza ajụjụ ndị a site n'iso ndị ọkà ihe ọmụma na ndị ọkà mmụta a ma ama na-arụrịta ụka, dị ka Al-Ghazali ma ọ bụ Ibn Kaldoun na-arụrịta ụka, ma ọ bụ na-atụgharị onwe ya n'ihe metụtara nke a ma ọ bụ na nkà ihe ọmụma ma ọ bụ nkà mmụta okpukpe ugbu a.
N'ikpeazụ, ka anyị were akụkụ Akwụkwọ Nsọ a nke gosipụtara oke etu onye na-eche echiche n'Africa si nwee mmụọ site na mmụọ nke obodo.
N'ihi ya, ọ na-echeta na 1603, na olu ọ na-akpọ "Tunfat al-fudala bi-bad fada'il al Ulama '" (Onyinye dị oke ọnụ na-agbasawanye omume nke ndị ọkà mmụta)
“Ndị nwere sayensị ma ọ bụ ihe ọmụma ma ghara ime ihe dịka nkuzi ha si dị ọkara ọkara na-erube isi, ebe ndị nwere ya ma ọ bụ nwee ya ma na-eme ihe kwekọrọ na ya nwere uru abụọ (…). Anyị na-akwado echiche nke ọkaibe nke ndị ọkammụta, dị ka ọ pụtara ìhè site na ọtụtụ hadiths na athars yana ọtụtụ ọdịnala ndị sitere na "ndị mgbe ochie ziri ezi". Mana ndị ọkà mmụta a na-ekwu okwu ebe a bụ ndị gosipụtara nsọ nsọ na nraranye ma na-agbaso nkuzi nke Quran na Sunnah, ọ bụghị ndị na-achọ inweta ọdịmma ozugbo ma ọ bụ otuto onwe ha site na sayensị ha. ".
Okwu a na-eme ka o doo anya na mmụọ nke obodo nke na-akpali echiche nke onye ọkà mmụta okpukpe. Ndi mmadu site na ikwuputa ego ekwesighi iburu ndi mmadu onu. Ọ na-emegidekwa nkwenkwe kpuru isi iji gosipụta nkwenye, ma na-akwado akụkụ nke abụọ ahụ. N'ịdabere na ikike nke ndị Alakụba, Baba na-akọ site na ụfọdụ ndị dọkịta okpukpe.
Ụfọdụ n'ime ndị a gụnyere:
- "chọọ sayensị na China ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa";
- "Ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị nketa nke ndị amụma";
- "Inye ndị ode akwụkwọ dị mma karịa ọbara ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha".
(lee zouber p.164)
Na mmechi na nkà mmụta ihe mmụta nke Ahmed Baba. Ekwesiri ighota na echiche ya dabere na iwu ndi Alakụba, nke abughi ihe ijuanya nye onye ochichi okpukpe. Ekwesiri imesi ya ike na ntughari uche ya diri ndi Africa, ma ajuju banyere nmekorita nke ndi sayensi na ndi ochichi, iji kowaa ebum n’uche ime ihe karie ihe nile iji kwado nkwuputa ya n’ebe ndi obodo no. Ọtụtụ ebe ngosipụta nke a na-egosipụta echiche mmụọ ọgụgụ isi ojii Africa n'ọtụtụ ebe.
Rwanda mebere ọrụ e-gọọmentị iji digitize ọrụ ọhaneze
Uru dị na mmanụ neem maka ntutu na anụahụ